Homeबिबिधमेगास्टार राजेशपायल राईको यो वाणी सुनौँ !
May 4, 2020 admin बिबिध
एमपी सुब्बा, काठमाडौं । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका ‘मेगास्टार’ राजेशपायल राईले लुँडो खेलेर दिन बिताएको पनि सोमबार ४२औँ दिन भयो । लुँडो खेल्नु राजेशपायलको रहर होइन, बा,ध्यता हो । लकडाउनको समय कसरी सदुपयोग गर्ने त ? ‘लुँडो खेल्ने हो, बेला–बेला साथीभाईसँग रमाइलो कुरा गर्ने । यस्तै त हो नि’ सोमबार उनकै निवासमा भेटिएका ‘राई इज किङ’ले भने, ‘लुँडो खेलेर समय बिताए पनि मनमा पीडा छ ।’
हो, पी,डा नहुने त कुरै भएन । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रकै सबैभन्दा व्यस्त गायक हुन्, राजेशपायल । तर उनी मन बुझाउन र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालन गर्ने सिलसिलामा लुँडो त खेल्छन्, तर उनको मनको पी,डा पनि छ किनकि, यो लकडाउनको अवधिमा अन्य व्यवसायले जसरी अर्थपार्जन गुमाए, त्यसरी नै राजेशपायलले पनि गुमाएका छन् ।
मेगास्टार राजेशपायलले यो लकडाउन अवधिमा कति गु,माएभन्दा पनि कमाइमा कति घाटा ब्यहोरे भन्ने कुरा हो । यो कुरा उनले पनि यकिनका साथ नभनेपनि करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म गुम्यो । सबैलाई थाहै छ, राजेशपायल एक यस्तो कलाकार हुन्, जो नेपाली कलाकारमा सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा गनिन्छन् । जस्तो उनको न्युनतम मानसिक आम्दानी १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ हो । तर, यो विश्वव्यापीरुपमा फै,लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सं,क्रमणका कारण उनको आम्दानी शून्य भएको छ । यसमा आचार्य मान्नु पर्ने अवस्था छैन । तर, राजेशपायलजस्तै विश्वका सयौँ मेगास्टारहरुलाई लकडाउनले ठूलै अ,सर पारेको छ ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा व्यस्त र म,हँगो कलाकारका रुपमा चिनिएका राजेशपायलले भने, ‘यो समयमा कति गु,माए भन्दा पनि कमाइ नभएको हो, यदि यो कोरोना भाइरसको सं,क्रमण नआएको भए यो ४२ दिनमा कार्यक्रमबाटै २५÷३० लाख क,माउँथे होला । अहिले सबै क्षेत्रले घा,टा बेहोर्दै आएको छ । व्यापार÷व्यवसायी घाटामा गएपछि आर्थिक म,न्दी देखिएको छ । त्यसैले पनि आफूले गुमाएको कुरा उनी सहज रुपमा भन्दैनन् । हुन पनि कोरोना भाइरसका कारण विश्वमै आर्थिक सं,कट आउने अवस्था छ । राजेशपायल जस्ता नेपालको स्टार गायकले जसरी आफ्नो आम्दानी घ,टेको कुरा दर्साए, यो कलाकारितामा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो ।
यतिखेर नेपाल मात्र होइन, विश्वका अधिकांश देश लकडाउन छ । राजनीतिज्ञदेखि राष्ट्र प्रमुखसम्म आफ्ना जनता महामा,रीबाट कसरी बचाउने भन्ने अभियानमा लागेको बेला आर्थिक म,न्दीले चरम रुप लिँदै गएको छ । नेपालको सन्दर्भका यहाँ प्रस्तुत गरिएका गायक राजेशपायल राई एक उदाहरण मात्र हुन् । यहाँ कोरोना रो,कथाम तथा नि,यन्त्रणका लागि सरकारद्वारा जारी लकडाउनका कारण दैनिक लाखौँ होइन, अर्बौ घाटा भइरहेको छ । तर, यहाँ राजेशपायललाई नै किन प्रस्तुत गरियो भने कुरा पनि छ । हो, राजेशपायल राई एक यस्ता कलाकार हुन्, दैनिक गीत रेकर्डिङ गरेरै लाखसम्म कमाउँछन् उनी । उनको स्टेज कार्यक्रमको त कुरै छा,डौँ । एक स्टेज कार्यक्रममा २ लाखदेखि ३ लाख ५० हजारसम्म लिन्छन् उनी । यी विषयमा कुरा गर्दा उनले भने, ‘म यति नै त भन्दिनँ, तर यो लकडाउनमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गुम्यो ।’
हुन पनि राजेशपायल १२ महिनामा ९ महिना विदेश कार्यक्रमकै व्यस्त हुन्छन् । नेपालमा हुँदा दैनिक २ देखि ५ वटासम्म गीत रेर्कड गर्न भ्याउँछन् । स्टुडियोमा उनी एउटा गीत गाएको २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
यसपटक लकडाउन हुनअघि नै उनको विभिन्न देशका लागि कार्यक्रम निश्चित भइसकेको थियो । माल्टा, स्वीडेन, नर्वे, आलिनलगायतका युरोपियन मुलकहरुमा कन्सर्टको तयारी रहेकै बेला कोरोनाको महामा,री विश्वव्यापी बन्यो । जसले यतिखेर विश्व नै आ,क्रान्त बनेको छ । यो बेला नेपालका यी मेगास्टार राजेशपायल पनि नेपाल र सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पालना गर्दै लुँडो खेल्दै समय बिताइरहेका छन् । र, उनी भन्छन्, ‘यो समय यस्तो हो, यतिखेर सबैले एक–अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले कोरोनाभाइरस नि,यन्त्रण तथा रो,कथामका लागि लकडाउनको घोषषा गरेको छ । आज लकडाउनको ४२औँ दिनसम्म जसरी घरमै बसेर सरकारको आदेश पालना गरेका छौँ । अझैपनि लकडाउनको पालना गरौँ र कोरोना भगाऔँ । सबै सु,रक्षित होऔँ ।’
आज राति १२ बजेदेखि कर्णाली प्रदेशका सबै ना का सि ल
बैशाख २३ गतेको राशिफल